[RASMI] Ladnaansho Xogta laga Device macruufka - Sidee u Hanuunin-ka
Hel bilaabay, heli daruuriga ah
dr.fone xidhmo - macruufka kabashada Xogta: Sida loo
Part 1. ka Device macruufka Ladnaansho Data toos ah
Part 2. Ladnaansho Data ka kaabta iTunes
Qaybta 3. Ladnaansho Data ka kaabta iCloud
Tallaabada 1. Connect macruufka Device la Computer
Launch dr.fone xidhmo on your computer. Isticmaal cable USB in ay timaado oo aad qalab macruufka ah in ay ku xidhmaan aad iPhone, iPad ama iPod taabashada, in aad computer ah. Riix "Data Recovery" oo dooro "kabsado Device macruufka" doorasho.
Talooyin: Ka hor inta socda dr.fone, aad u maleeyeen tahay inaad kala soo baxdo version ugu dambeeyay ee iTunes. Si looga fogaado si toos ah u hagaagsan, ma bilaabi iTunes markii ordaya xidhmo dr.fone. Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad gab syncing ku automatical ee iTunes hore: bilaabi iTunes> rabtid> Qalabka, eeg "Ka hortag iPod, iPhone, iPad iyo ka syncing si toos ah".
Tallaabada 2. baarista Device for Data Khasaaray Waxaa on
Si fudud riix "Start Scan" button in aynu barnaamijkan baarista iPhone, iPad ama iPod taabashada si scan xogta la tirtiro ama laga badiyay. habka g iskaanka wuxuu socon karaa dhowr daqiiqo, taas oo ku xidhan qadarka xogta on qalab aad. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka iskaanka, haddii aad aragto in xogta aad raadineyso weeyna jiro, ka dibna aad riix kartaa "Haki" button in la joojiyo geedi socodka.
Step 3. Kulanka Xiisaha Data iskaan ah
Skaanka aad qaadan doontaa waqti qaar ka mid ah. Marka waxaa la dhameystiray, waxaad ka arki kartaa natiijo scan ee ay barnaamijka. Data labada badiyay oo hadda jira on qalab aad waxaa lagu soo bandhigaa in qaybaha. Si aad u shaandhayso soo baxay xogta la tirtiray on your qalab macruufka ah, aad mari kartaa kala xulashada "Kaliya bandhigaan waxyaabaha la tirtiray" in ay ON. By gujinaya nooca file ee dhanka bidix, waxaad ku eegaan karo xogta laga helay. Oo waxaad ka arki kartaa waxa jira sanduuqa raadinta on xaq u top of daaqadda a. Waxaad ka raadin kartaa file gaar ah oo ku garaacaya ereyada keyword ah sanduuqa raadinta.
Tallaabada 4. ka Your taabashada iPhone / iPad / iPod Ladnaansho Data
Marka aad hesho macluumaadka aad u baahan tahay, kaliya calaamad jeegga hore ee sanduuqa si ay u doortaan. Ka dib markaas, riix "Ladnaansho" button midig hoose ee suuqa kala. By default, xogta soo kabsaday badbaadi doontaa in aad computer. Sida fariimaha qoraalka ah, iMessage, xiriirada, ama qoraal, marka aad guji Ladnaansho, a pop-up ku weydiin doonaa inaad "Ladnaansho in Computer" ama "Ladnaansho in Device". Haddii aad rabto in ay ku riday fariimahan dib si aad qalab macruufka ah, guji "Ladnaansho in Device".
Step 1. Dooro Recovery Mode
Launch dr.fone oo dooro "kabsado iTunes File kaabta" ka "Data Recovery" qalab. Ka dib markaas, iTunes qalab kabashada gurmad ah lagu ogaan doonaa oo dhan iTunes files raad raac ah oo ku saabsan computer iyo u muujiyaan furmo. Waxaad xaqiijin karaa taas oo ka mid ah waa mid ka mid ah aad u baahan tahay sida ay taariikhda waxaa la abuuray.
Tallaabada 2. Data Scan ka iTunes File kaabta
Dooro file gurmad iTunes ay ku jiraan macluumaadka aad rabto in aad ka soo kaban oo guji "Start Scan". Waxay qaadan doontaa dhowr daqiiqo soo saaro dhammaan xogta ka faylka gurmad iTunes. Dulqaad.
Step 3. Kulanka Xiisaha ceshan Data ka kaabta iTunes
dhowr ilbiriqsi ka dib, dhammaan xogta ku file gurmad la soo saaro doonaa oo soo bandhigay qaybaha. Waxaad iyaga ku eegaan karo mid ka mid ah ka hor dib u soo kabashada. Markaas eegista aad calaamadee karaa ceshan kuwa aad rabto adigoo riixaya ee "Ladnaansho" button hoose. Haddaba xiriirada, qoraalada iyo fariimaha waxaa si toos ah soo kabsaday kartaa qalab macruufka ah haddii aad haysato qalab macruufka xiran your computer via cable USB ah inta lagu guda jiro geeddi-socodka dib u soo kabashada.
Talooyin: waxaad ka arki kartaa waxa jira sanduuqa raadinta ee suuqa kala natiijada ah. From waxaa jira, waxaad ku qor kartaa magaca file ah si aad u raadiso waxaa loogu talagalay.
Ka dib markii socda xidhmo dr.fone, dooran hab dib u soo kabashada ee "soo kabsado iCloud kaabta Files" ka "Data Recovery" on muraayada ah. Markaas waxaad arki doonaa suuqa kala hoose. Waxaad ku qortaa account iCloud iyo password in ay gasho. dr.fone qaadataa si dhab ah kuu gaarka ah. Waxaan marnaba ku kaydiyaan wixii aad Apple info account ama content waqti kasta inta lagu jiro kalfadhiyada aad.
Tallaabada 2. Download File kaabta iCloud
Marka aad qortey shubo iCloud, barnaamijka ka heli kartaa dhammaan faylasha gurmad iCloud in aad xisaabta. mid ka mid ah meesha aad ku socoto inuu ka soo kabsado xogta iyo guji ah "Download" button Dooro.
Oo markaas ee pop-up, waxaad dooran kartaa nooca files aad jeclaan lahayd inaad kala soo baxdo. Tani waxay hoos u dhigi doontaa waqtiga degsado faylka gurmad iCloud. Ka dib markii in, aad iskaan kartaa content iCloud hadda. Click on the "Scan" button in la bilaabo. Waxa aad qaadan doontaa waqti qaar ka mid ah. Just sugaan in mudo ah.
Step 3. Kulanka Xiisaha iyo iCloud File kaabta Ladnaansho Data
scan wuxuu noqon doonaa dhameystiran dhowr daqiiqo. Marka la joojiyo, waxaad ku eegaan karo ku dhowaad dhammaan xogta aad iCloud file gurmad, sida xiriirada, fariimaha, sawiro, iyo in ka badan. iyaga Hubi mid mid iyo sax shayga aad rabto in aad. Markaas riix batoonka "Ladnaansho in Computer" ama "Ladnaansho in qalab aad" si ay u badbaadin on your computer ama qalab aad la mid click.
Haddaba xiriirada, fariimaha iyo qoraalada waxaa si toos ah soo kabsaday kartaa qalab macruufka ah haddii aad iPhone, iPad ama iPod taabashada xiran yahay your computer la cable USB ah inta lagu guda jiro geeddi-socodka dib u soo kabashada.
Ku rakib, Update, uninstall